Akhri: Alshabaab oo doonaya beesiga danaha Mareykanka ee dunida (Cod cusub oo kasoo baxay) – Mareeg.com somalia, World News and Opinion.
Akhri: Alshabaab oo doonaya beesiga danaha Mareykanka ee dunida (Cod cusub oo kasoo baxay)
Mareeg.com: Xarakada Alshabaab ayaa ku baaqday ragga u dagaalama iney beegsadaan danaha Mareykanka ee caalamka, iyagoo ku eedeeyey inuu ugaarsanayo hoggaamiyaasha Mujaahidiinta.
Kalimad uu jeediyey Afhayeenka, Alshabaab, Sheekh Cali Dheere, kuna baxday afka Carabiga ayaa lagu amaanay hogaamiyihii Alshabaab ee Maryeknka duqeynta ku dilay bishii September ee sanadkan 2014.
Cali Dheere ayaa bilwoga kalimadiisa ku sheegay iney sagootiyeen hogaamiyahoodii Abuu Zubeyr, kaasoo uu ku sheegay nin si weyn isgu taagay dhibaatada heysata Muslimiinta.
Afhayeenka ayaa sheegay in Abuu Zubeyr uu iska diiday gorgortanka diinta iyo inuu wada hadalka aan u adeegeyn sharciga Alle, taas ayaana keentay ayuu yiri in Mareykanku duqeeyaan.
“Abuu Zubeyr wuxuu soo galay Soomaaliya oo kala daadsan, wuxuuna ka baxay Soomaaliya oo ah goob uu ka socdo Jihaad adag” ayuu Cali Dheere ku amaanay Abuu Zubeyr, isagoo tilmaamay in Abuu Zubeyr dagaalka kasoo bilaabay dalka Afghanistan.
“Mareykanka dambiilaha ah wuxuu ku dhiiraday inuu dilo Sheekhiina, mana idiin haboona inaad iska joogtaan adinkoo aan beegsan danaha Mareykanka, meel kasta oo ay yaallaan, waxba kuma toornin haddii aan bixin weyno jawaab celin adag” ayuu sidoo kale yiri Sheekh Cali Dheere.
“Waan ka murugooneynaa geerida Sheekh Abuu Zubeyr, Hambalyo ayaan ku leenahay Sheekheekna aan ku daya jirnayow, waxaana leenahay Alle hakaa aqbalo Shahaadada, waxaan maanta kuu sagootineynaa sidii aan u sagootinay saaxiibkaa Aadan Ceyrow iyo Sheekheenii Abuu Zubeyr” ayuu afhayeenka Alshabaab hadalkiisa kusoo gebagebeeyey.
Baaqaan kasoo baxay Alshabaab ee ah in la beegsado danaha Mareykanka ayaa kusoo beegmay xilli dowladda Islaamiga ah ee Suuriya Ciraaq ay shaacisay iney gowracday muwaadin Mareykan ah, kaasoo u shaqeynayey hay’ad samafal laguna magacaabo Peter Kaseg.
6-dii bishii September ayaa diyaaradaha dagaalka Mareykanku waxeyn duqeyn ku dileen hogaamiyihii Alshabaab Abuu Zubeyr, isagoo marayey gobolka Shabeellaha Hoose, waxaana markaas kadib Alshabab hogaamiye cusub u magacaabay Sheekh Axmed Cumar Abuu Cubeyda oo aan weli codkiisa la maqlin.
DEG DEG: Inta badan xubnaha Golaha Wasiirada oo ugu baaqay Ra’iisul Wasaaraha inuu is casilo